CPA vs CA (Chartered Accountant): Yikuphi ongcono Wena?
23 Aug CPA vs CA (Chartered Accountant): Yikuphi ongcono Wena?
Yikuphi okungcono? Yikuphi ukuqokwa kuzosiza umsebenzi wakho? Uma sinquma owukhethayo umsebenzi e accountants, kungenzeka ukuthi uxakekile ukukhetha phakathi CPA noma CA. Umbuzo omkhulu ukuthi kuphakama ingabe CPA uyazuza endleleni zakho nge-career noma CA? Akukho clear winner ngoba kokubili iziqu kuzosiza sikhule amakhono akho lobuchwepheshe, amakhono accountants kanye namakhono okuphatha ibhizinisi. Futhi, CPA nama-CA abanikazi avame ukuba ngokulinganayo sisabalale ezimali commercial futhi umphakathi - ngakho ziqu ngamunye inikeza Ukuzivumelanisa nezimo esiphezulu ukusebenza kuyo yonke umkhakha. Ake sibheke ukuthi ngasinye salezi izitifiketi kuhilelani futhi umehluko omkhulu phakathi kwalezi zinto zombili.
CPA vs CA: Umsebenzi Indlela
CPA vs CA: Imiholo
CPA vs CA: Izidingo isikhathi
CPA vs CA: Certification lezindleko Izidingo
A Umbali wezimali ogunyaziwe womphakathi is a professional abanale sekudlule CPA ukuhlolwa okunikezwa American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) futhi wagcwalisa zonke izimfuneko imfundo nokuhlangenwe nakho komsebenzi elihlobene ne ukuthatha ukuhlolwa. Lezi ochwepheshe ochwepheshe US GAAP, US kwentela engenayo federal, kanye nezinye izindawo eziningana US zokubala umthetho wezimali ezifana kuhlaziywe. Nakuba lokhu isitifiketi kuyahlonishwa emhlabeni wonke, kungcono kube isiqu US esiqinisa ukuthi professional olunzulu US zokubala akwazi ukwenza kuhlaziywe futhi intela imisebenzi nezinye izifundiswa awavunyelwe ukwenza.
A Chartered Accountant (CA) is a professional osanda kushona CA ukuhlolwa kanye imfundo edingekayo ezweni lakhe izitifiketi. Kukhona izinhlangano eziningi ezinikeza imfundo neluhlolo CAS. A izibonelo ezimbalwa zihlanganisa i-Institute of Chartered Accountants yeScotland (ICAS), Institute of Chartered Accountants eNgilandi naseWales (ICAEW), Isikhungo Chartered Accountants yeNdiya (Ichhai) kanye Canadian Isikhungo Chartered Accountants (CICA.) Accountants Chartered eCanada, Australia, E-New Zealand, EMexico nase-Ireland nesivumelwano reciprocity ne-United States. Uma zingakwazi ukuphumelela esivivinyweni ukulingana, bangasebenza U.S. njengoba CPAs. CAS ochwepheshe IFRS nezinye amazinga ezimali ngamazwe. Nakuba bengase babe yayiziqonda kahle ku US GAAP, kungukuthi njengoba abaqeqeshiwe kule ndawo njengoba CPAs kukhona.
Ukuqokwa CPA uyokuvulela eziningi ongakhetha umsebenzi ngawe. Ngemva kokuthola nesitifiketi sakho CPA ungasebenza ngaphansi ezimali emikhakheni ehlukahlukene ezifana International Accounting, Yangaphakathi & Ukucubungula amabhuku ezimali sangaphandle, Consulting Services, Accounting Forensic, amasevisi Isiqinisekiso, Intela & Ukuhlelwa kwezezimali njll. Ukuqashelwa yayo emhlabeni wonke, uzothola indawo engcono ukusebenza kuphi emazweni amaningi. Ngokufanayo, CA Isikhundla izokunikeza ongakhetha eziningi ezindaweni ezikhethekile Accounting ezifana Auditing, Intela, Ezezimali Corporate, nomthetho wezamabhizinisi. Ngemva kokuthola CA yakho Certification yezimanga umsebenzi ekhona amafemu phezulu accountants noma ungaqala siqu umkhuba wakho ezimele lochwepheshe.
Bobabili CPAs futhi CAS amaholo zincike endaweni okuyo, isihloko somsebenzi, futhi oseneminyaka engu-. Ngakho, bona ehlukene kakhulu. Umholo lesemkhatsini okwesikhathi CPA U.S. kuyinto $62,410 kanye iholo lesemkhatsini okwesikhathi CA ku U.K. ngu- £ 34.637 ($44,849 USD). Bobabili izitifiketi babe ezinkulu iholo ukuhamba phezulu futhi kungaba ngamunye enze $150,000 noma ngaphezulu unyaka ngamunye kuncike isikhundla kanye nezinga okwenzeka.
Kuyinto kuqondile okuthé xaxa ukuze abe CPA ngokuya izidingo isikhathi. Kufanele uqedele 150 undergraduate amahora esikweletu kumelwe futhi baye basebenza inani elithile amahora ngaphansi kweso we-CPA. Wena-ke kufanele 18 izinyanga ukuhlala icele kanye kudlule bonke izingxenye ezine CPA ukuhlolwa. Ngakho, kungatsatsa mayelana 8 1/2 iminyaka ukuba abe CPA (eminyakeni emihlanu yomsebenzi undergraduate, iminyaka emibili emsebenzini kanye 18 izinyanga ukudlula ukuhlolwa CPA). isikhathi esingakanani edingekayo ukuze ube CA kuxhomeke kulokho izwe ohlela ukuzijayeza futhi izinga lakho lemfundo kanye isipiliyoni lochwepheshe. Njengoba isibonelo, the ICAS has amane okukhethwa:
ukungena ngqo umzila esikolweni bangakakulungeli, edinga iminyaka ezinhlanu zokuqeqeshwa nge umqashi ICAS-evunyiwe;
Graduate entry umzila abaneziqu zaseyunivesithi, edinga kweminyaka emithathu yokuqeqeshwa nomqashi ICAS-evunyiwe;
Usizo lwabenza imisenenzi entry umzila wazibonela ezezimali ochwepheshe is for ochwepheshe iqiniswe zaseyunivesithi (ngokusemthethweni hlonishwa njengomphakathi okulingana UK) noma iminyaka emihlanu olufanele lomsebenzi
Ezindleleni umzila evumela amalungu I-Chartered Institute of Public Finance kanye accountants (CIPFA) ithuba lokuba yilungu ICAS bese uhola CA isiqu.
Kukhona izindlela ezimbili; omunye alinganise ubuchwepheshe efanele kanye nezinye, ikhono lokwenza. Bobabili izindlela ezidinga iminyaka eyisikhombisa post-ziqu isipiliyoni. The best "apula ama-apula" ukuqhathanisa kuyoba CPA = ICAS Indlela #2.
Ukuthi kubiza malini ukuze uthole ilayisense yakho ye-CPA kuyinto variable. Zonke izifundazwe adinga ukuthi uthole ubuncane iziqu ze-bachelor accounting noma ibhizinisi kubandakanya inombolo of izifundo adingekayo. Cishe kuwo onke amazwe adinga ukuthi uthole okungenani 150 credit amahora kanye. Ngakho, CPA kwakho kwezemfundo kudinga ngeke iyashiyana uma uphishekela iziqu zeMasters ukuze uthole yakho yokugcina 25 ekolishi credit amahora noma bamane bathathe amakilasi ngaphezulu ohlelweni lwakho degree undergraduate. Inqubo isitifiketi ngokwayo izobiza mayelana $3,000 kuhlanganise efanele CPA Ukubuyekeza Yiqiniso futhi ukuhlolwa izimali. Ngemuva kokuthi kudlule ukuhlolwa, kuyodingeka ucabange nangezilaleli ukugcina ilayisense yakho elivumelekile imfundo okuqhubekayo credits unyaka ngamunye. Lezi ziyehluka intengo kodwa iningi abiza phakathi $50-$100 ngayinye credit ihora. uthi eminingi idinga emhlabeni 40 credits ngonyaka. Ungakhathazeki kodwa. Uma uthola umsebenzi accounting ngokuqinile yomphakathi, bayoba ukukhokhela imfundo yakho kokuqhubeka.
Izindleko zokuba CA kuncike kuzwe uhlala, umuzwa wakho imfundo kanye nomsebenzi futhi yini inhlangano oyicelelayo ukuze ukuthola sokuqinisekisa wakho.
Ngokwesibonelo, uma isicelo ICAS futhi ukhetha Pathways #1 futhi #2 (ukungena ngqo esikoleni noma enyuvesi) ke umqashi wakho ngeke nezindleko. Uma ukhetha Indlela #3 (abanolwazi Professional), izindleko kukhona cishe £ 5.750 - £ 13.900. indlela #4 (amalungu CIPFA) Izindleko £ 1,035 ngokuba ahambisanayo Ubuchule Indlela. Ukuze Olungokoqobo zamaKhono Indlela, izindleko kukhona: £ 596 ngoba inkontileka ukuqeqeshwa; £ 1.547 - £ 1.935 ngenani ekilasini; £ 292 ngoba imali ukuhlolwa kanye £ 495 ngoba yonyaka ICAS / CIPFA ubulungu izinkokhelo. Uma kukhona imfundo okuqhubekayo namalayisensi izidingo, bayobizwa kunqunywa ezweni lapho abasebenza.
Uma anentshisekelo phesheya noma inkampani esemazweni amaningi, ke kufanele ukhethe i-CPA. Ungafunda okwengeziwe engcono CPA PrEP izifundo lapha. Kungenjalo, uma ufuna eyakho audit umkhuba eNdiya, ukhetha CA. Ngaphezu kwalokho, ukuhlolwa CA lingaphansi ebizayo njengoba kuqhathaniswa luhlolo CPA. Ngiphakathi esinye salezi izitifiketi bangcono omunye. Limane nje ezahlukene iphindze isetjentiselwe tinhloso letinyenti ezahlukene. Ungalindela ukwenza mayelana iholo okufanayo kokubili izifakazo unikezwa ukuthi indawo, isikhundla umsebenzi, inkampani, nokuhlangenwe nakho komsebenzi ziyafana. It ngempela zehla kulokho ofuna ukukwenza futhi lapho ufuna ukusebenza. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
CPA, Roger CPA ukubuyekeza, Isaphulelo okukhethekile, Isaphulelo Deep 41 isebenzisa namuhla
kugcinwe ukusetshenziswa 20 amaminithi adlule
CPA, Surgent CPA ukubuyekeza, Isaphulelo okukhethekile 37 isebenzisa namuhla
CPA, Wiley CPAexcel, Ukunikezwa okubalulekile 40 isebenzisa namuhla
CPA, Roger CPA ukubuyekeza, Isaphulelo okukhethekile 34 isebenzisa namuhla
Usuku lokuphelelwa isikhathi: Okthoba 15, 2018
CPA, Surgent CPA ukubuyekeza, Isaphulelo Deep 41 isebenzisa namuhla
kugcinwe ukusetshenziswa 8 amasekhondi adlule
CPA, Isaphulelo okukhethekile, Tunzale Academy 38 isebenzisa namuhla
kugcinwe ukusetshenziswa 37 amaminithi adlule
kugcinwe ukusetshenziswa 24 amaminithi adlule
CPA, Yaeger CPA ukubuyekeza, Isaphulelo okukhethekile 40 isebenzisa namuhla
CPA, Gleim CPA ukubuyekeza, Ukunikezwa okubalulekile 36 isebenzisa namuhla
CPA, Gryfina, Isaphulelo okukhethekile 35 isebenzisa namuhla
CPA, Gleim CPA ukubuyekeza, Isaphulelo okukhethekile 35 isebenzisa namuhla
CPA, Wiley CPAexcel, Isaphulelo okukhethekile 39 isebenzisa namuhla
CPA, Surgent CPA ukubuyekeza, webinar 40 isebenzisa namuhla
CPA, Roger CPA ukubuyekeza, Ukukhokhela Ukunikeza 38 isebenzisa namuhla
CPA, Surgent CPA ukubuyekeza, Ukukhokhela Ukunikeza 40 isebenzisa namuhla
kugcinwe ukusetshenziswa 7 amaminithi adlule
Usuku lokuphelelwa isikhathi: Okthoba 16, 2018
CPA, Roger CPA ukubuyekeza, Okunye 34 isebenzisa namuhla
CPA, Wiley CPAexcel, Okunye 39 isebenzisa namuhla
CPA, Wiley CPAexcel, Isaphulelo okukhethekile 33 isebenzisa namuhla